China Batching chisanganiso System Kugadzira uye Fekitori | Jusheng
Automaticaggregate Batching Fertilizer Chisanganiso
Mushini wekucheka ndicho chinhu chikuru cheiyo chiteshi chekusanganisa, icho chinogona kuganhurwa munzira mbiri: kuyera kwekuwedzera uye kuyerwa kwemunhu.
Kuwedzera metering kazhinji kunotora humburumbira kudzora kuburitsa zvinhu. Iyo yekuwedzera metering yechinhu chimwe nechimwe yakanyatsojeka kupfuura yekutanga bhandi kuburitsa metering. Izvo zvinodiwa zvinhu zvakasanganiswa pazasi rakadzika bhandi conveyor mushure mekuteedzana metering, uye zvobva zvatumirwa kune yakanamatira bhandi neyakaenzana bhandi conveyor. Muchina kana kusimudza bhaketi.
Kuparadzanisa kuyera kunoreva kuti chinyorwa chega chega chinoyerwa zvakasiyana kuburikidza neyekuyera hopper. Maitiro aya anogona kuitwa panguva imwe chete, kuchengetedza nguva yekuyera uye kuita kuti kuyerwa kufambire mberi kuve kwakarurama.
Huwandu uye huwandu hwenzvimbo yekuchengetera muchina wekucheka wakagadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi, kazhinji 3-5 migomo uye 8-40 makwere / bhaketi, ayo anogona kuchengeta mhando dzakasiyana dzejecha rakanaka, jecha nematombo.
Maumbirwo emuchina wekucheka unogona kugadzirwa seyakavakirwa ivhu chivakwa, semi-pasi chivakwa chekuchengetera kana yakazara ivhu imba yekuchengetera mamiriro zvichienderana nezvinodiwa nevashandisi. Nekuda kweiyo yakaringana kurodha kukwirira kweanotakura, iyo yakachena ivhu dhizaini inoda kuti mushandisi atange-kukanda iyo yekurodha materu. Iyo hafu-yepasi silo dhizaini kana izere-yepasi silo dhizaini inogona kuchengetedza iyo yekurodha materu, asi iyo yekupedzisira ine gomba, saka zvinofanirwa kuitwa Kuti uvandudze drainage yegomba, uye kuve nechokwadi chekuburitsa kugona kweanofarira bhandi conveyor, iyo inofarira bhandi conveyor inoda kuwedzerwa kana iyo yekuendesa kona yakaramba isina kuchinjika, izvo zvinowedzera mutengo wekushandisa.
modhi kwete. PLD800 PLD1200 WDC1600 WDC2400 PLD3600 PLD4800
chinzvimbo chekuyera hopper (m³） 1 * 0.8 1 * 1.2 1x1.6 1x2.4 1x3.6 1x4.8
chinzvimbo chekuchengetedza hopper (m³) 3 * 4 3 * 8 4x10 4x10 4x14 4x16
kunyatsoita batching ± 2% ± 2% ± 2% ± 2% ± 2% ± 2%
kurema kukuru (kg) 0 ~ 1000 0 ~ 1500 0 ~ 2500 0 ~ 3500 0 ~ 4500 0 ~ 6000
mhando dzemhando dzekutengesa 2-3 2-3 4 4 4 4
bhandi rinotakura kumhanya (m / s) 2 2 2 2 2 2
simba (kw) 4-5.5 5.5-7.5 11 11 15 15
Iyo PLD800 / PLD1200 kongiri batching muchina ndeye otomatiki batching michina inoshandiswa pamwe chete nemusanganisi. Iyo inogona otomatiki kupedzisa batching maitiro emhando mbiri dzemhando dzakadai sejecha nedombo maererano nekongiri reshiyo yakatarwa nemushandisi. Muchina uyu unogona kushandiswa pamwe chete neJS500 uye JS750 mixers kuti vagadzire nyore kongiri yekusanganisa chiteshi. Iyo kongiri yekugadzira michina yemabhizimusi uye ehurumende kuvaka mapurojekiti, epakati uye madiki ekuvaka nzvimbo uye precast zvikamu mafekitori. Muchina uyu unoumbwa nekudyisa mashandiro, kuyera sisitimu, yemagetsi kudzora system, nezvimwewo. Chimiro chayo ndechekuti nzira yekudyisa yakarongedzwa mu "one" chimiro, iyo inotakura inodyisa, iyo yekudyisa mashandiro ibhandi rinotakura kufudza, iyo inorema fomu ndeye lever + sensor, uye kuyerwa kwakarurama.
1.Iyero chaiyo, kurema kwakaringana kurema; 2. Kwakanaka mashandiro esero remutoro, kuyerwa kwakaringana uye kwakatsiga; 3. Iyo yakarongeka mamiriro inonzwisisika, yakaoma uye yakanaka; 4. Kuendesa kwakatsiga, uye izvo zvinhu zvinogona kupihwa zvakajairika; 5. Weight 2 marudzi eakaunganidzwa panguva imwe chete, aine pfupi yekuyera nguva uye kugona kwakanyanya;
PLD800 / PLD1200 kongiri batching muchina unogona kusanganiswa unoenderana mamodheru kuti aumbe akasanganiswa kongiri batching miti yemhando dzakasiyana uye zvirevo. Ivo anonyanya kushandiswa muHZS25 / HZS35 batching zvirimwa kana zvidiki zvekuvakisa nzvimbo.
PLD1600 / 2400 / 3600/4800
Iyo PLD1600 / 2400 / 3600/4800 kongiri batching muchina ine yakakwira batching chaiyo uye yakanyanya kurongeka. Iyo batching chishandiso inotora bhandi conveyor yekudyisa kana inotakura nzira yekudyisa kunyatso simbisa iko chokwadi kweiyo inosanganisa reshiyo yesimende / jecha / hurungudo kana anopfuura anopfuura matatu marudzi ejecha nematombo zvinhu. Mhando huru ndeye PLD1600 matatu imba yekuchengetera batching muchina, PLD1600 ina yekuchengetera batching muchina. Iyo kongiri batching muchina chishandiso chega chega chinoshandiswa kugovera huwandu hwezvinhu zvakasiyana senge jecha nejecha. Inonyanya kushandiswa muindasitiri yekuvaka yekongiri kutsiva zviyero zvepuratifomu kana vhoriyamu kuyera. Iyo ine yakanyanya kuyerwa kurongeka, yakakwira kugovera kugona, uye otomatiki. Zvemberi maficha ndeimwe yeakakosha zvikamu zveiyo yakazara seti yemidziyo yeiyo yakazara otomatiki kongiri yekusanganisa chirimwa. Nokuramba uchivandudza, iyo kongiri batching muchina waumba iwo akawanda-akateedzana, akawanda-akasiyana uye akawanda-chinangwa chigadzirwa system. Ivo anonyanya kushandiswa muHZS60 / HZS90 / HZS120 / HZS180 batching chirimwa
Unyanzvi hunhu hwekongiri batching muchina
• Hwakarema uye huremu huremu, hune huremu hwakakwana hwehuremu;
Takura sero nekuita kwakanakisa, kuyerwa uye kugadzikana kuyerwa
Iyo mamiriro ese ane musoro, akaomarara uye akanaka;
• Inogona kuyera 3-5 marudzi eanoungana, iine pfupi yekuyera nguva uye kugona kwakanyanya;
• Pane screw tensioning mudziyo pamuswe, unogona kugadzirisa kukakavara kwebhanhire, iri nyore uye nekukurumidza;
• Vibrator akaiswa pamadziro emadziro ejecha bin uye jecha rinorema bhaketi kuitira kurema uye kuburutsa ..
Concrete chisanganiso Spare Zvikamu, Aggregate Batching Dosing Sisitimu, Otomatiki Aggregate Batching System, Otomatiki Aggregate Batching Machine, Aggregate Batching System, Automaticaggregate Batching Fertilizer Chisanganiso,